12:36:53 AM (Sat)
Created on Wednesday, 19 June 2013 20:18
United Liberation Forces of Oromiyaa (ULFO) United Activists and Members of Oromo Liberation Front (UAM-OLF)
Created on Monday, 03 June 2013 15:33
(Barsiisaa, Sabboonaa, Sheeka)
Fuulli Rabbii itti haa tolu
Barri dhaloota isaa 1934. Lafti dhalootaa aanaa Carcar, Hararge. Nama sabboonaa ummta ofii jaalatuu fii qabsaa’aa ta’uuf naanno kanaa olitti kan nama hamilchiisu hin jiru jechuun ni danda’ama.
Abbaan isaa nama amantii Islaamaa hordofu ta’uu irraa kana ka’e mana qur’aana itti baratutti ergame. Achitti akkuma ilmaan yaroo saniitti amantii isaa hordofuun qajeelfama jiruuf isa feesisu baratee ogummaa silaa feesisu itti qadhaabate.
Carcar lafa diinni ‘Habashaa’ lola hedduu ummata Oromo wajji itti godhe ta’uun ni beekkama. Lola boodas nafxanyoonni lafa saamuun akka ummanni qabeenna hin horanne godhanii, jiruun ummataa abbootii lafaatiif dirqamanii dalaguu qofa ta’e. Haalli hadhaahaan akkasii kun waan abbootiin zamana san keessa ilmaanitti himanii fii barsiisan keessaa qooda guddaa qaba. Sh.Mohaammad Rashaad haala kana fakkaatu keessatti guddachuu fii of beekuun caalatii akka muratee waa godhu isa dirqe.
Ilmaan zamanaa san waa barachuuf ganda ofii irraa fagaatanii deemaa turan. Kunis jajjabeenna, kutannoo fii ogummaa guddaa namaaf akka dabalu hubatamaadha. Sh.Mohaammad Rashaad haasa’a ummata duratti godhan keessaa kanaatu calaqqisa. Biyya keessa naannoo gara garaa dhaquu fii namoota adda addaatiin wajji wal arguun caalatti akka jiruu fuulduraatiif qophaa’u isa godhe.
Irra caalatti baruumsaaf Sh. Bakri Sapaloo bira turuun daranuu akka xiinxallaa jiruu qabaatu fii ummata ofiitii yaada’u isa godhe. Akkuma beekkamu Sh. Bakri nama mootummaa H.Sillaaseetiin mormee fii Afaan Oromoo babal’isuu irratti qooda guddaa qabaataa ture; haga mana hidhaa dhaabbataa (qum isir) bara 1965 tti seenetti.
Created on Thursday, 30 May 2013 21:45
Ebla 25, 2013
Mootummaan Wayyaanee shanyii Oromoo lafarraa fixuuf lola cimsaa jirti. Dhiheenna kana hawaasa Oromoo ‘Harargee Bahaa’ irratti xiyyeeffattee jiri. Ammaan tana ummattni naannoo Aniyyaa, Jaarsoo tii fii Mi’eessoo haala kanaan miidhamaa jira.
Lolli ammaan tana naannoo baha Harargeetti deemaa jiru kun karoora guddaa mootummaan Wayyanee ummata Oromoo lafa akaakayyuu fii Abaabayyyuu isaarra buqqisuu fii qubsuma Oromoo xiqqeessuuf saganteeyfatte hojitti hiikuudhaan wajjiin kan walqabate tahuu mirkaneeysa. Karoorri hogganoota Wayyanee, kani isaanuu lafa argame hundatti ibsan kun, fedhii yeroo dheeraa kan siyaasaa tiifii kan saaminsa dinagdee guuttachuuf akka ta’e ni hubatama.
Galiin beekkamaan Wayyaanee qabdu jiruu ilmaan Oromoo guutumatti barbadeeysuudha. Mootummaan saba bicuu tan humna qawweetiin angoo dhunfatte baayyinna ummata Oromoorraa soda guddaa qabdi. Sodaa kana ifirraa xiqqeessitee haga dandeette lafa Oromoorra turuuf waan dandeettu hundatti dhimmaa ba’aa jirti.
Gochi dabaa kani Wayyaanee godhaa jirtu kun lafa gara garaatti ummata Oromoorratti miidhaa guddaa fidee jira. Baroota 22aan dabran keessa, Wayyaneen lola duguuginsa shanyii Oromoorratti oofaa dhufte. Gariin lola fixiinsa Oromoo kuni dhoksaadhaan geggeeffamaa ture. Lola dhooksaa kanaan lubbuu namaa tiifii qabeennaas hedduu barbadeeysan.
Created on Friday, 24 May 2013 13:52